Edozi-Can't play .mov faịlụ na Windows Media Player 12/11 / 10etc e
Part 1: Gịnị bụ MOV format?
Part2: Gịnị Windows Media Player apụghị egwu MOV?
Part3: Olee na-egwu MOV na Windows Media Player?
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà atụmatụ nke Windows Media Player na ọ pụrụ dina fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke faịlụ na onye ọrụ na-achọ na maka otu ihe ahụ ọ na-ahuta ka ndị kasị mma na ọkaibe ọkpụkpọ na ike ọ bụghị nanị na-ahụ na onye ọrụ mgbe achọ a ọhụrụ echichi ma n'aka nke ọzọ ọ na-eme ka n'aka na nke kacha mma e nyefewo ha n'aka onye ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke dị ka ọ na-e wuru dị ka a akụkụ nke OS na nke a. Otú ọ dị ụfọdụ formats na-adịghị na-egwuri na a nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ mbipụta banyere .mov format na-egbo.
Mepụtara site na International Standards Òtù a bụ otu n'ime ndị kasị mma formats nke na-n'aka na-erughị ohere na-na-arụ na data transfer dị mfe na ọkaibe. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere onye ọrụ bụghị nanị na osịmde arụpụta ihe kasị mma na okwu nke na-akpọ ma ọ na-eme ka n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na onye ọrụ nyefe nke data na dechara. N'adịghị ka ndị ọzọ formats nke a ka e mepụtara na-eme ka n'aka na cross n'elu ikpo okwu ndakọrịta mbipụta na-kpebiri ozugbo o kwere omume. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro a na-eji na Windows Media Player mgbe needful e mere na mkpokọta mbipụta na-na-kpebiri na nke a.
Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na egwuregwu na-ebudatara iji jide n'aka na ebre nke MOV format ahụ kwe omume kwesịrị e mepụtara ma ama na ụlọ ọrụ mere na n'ikpeazụ onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla mbipụta na mmekọrita a onu. Ọ na-njikọ chiri anya MP4 format ka ha ma na-eji otu MPEG-4 format akpa na Ya mere, ndị abụọ formats nwekwara ike na-ahuta ka na-akpachi anya na mmekọrita akpa ohere. Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita na doro nke na ọ na-kpebiri na zuru ka kwa uche na ọchịchọ nke onye ọrụ. The nkuzi ga-emekwa ka n'aka na mkpa ngwaọrụ na-nyere na nke a na-eme ka n'aka na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na n'agbanyeghị ihe ọ bụla na faịlụ a ọ na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu mgbe ọ na-abịa windows mgbasa ozi ọkpụkpọ .
E nwere ọtụtụ ihe ndị na-n'azụ nke na e kwuru na ha nwere ike ịbụ ma oru na-abụghị oru. Teknuzu okwu ndị Otú ọ dị ezigbo mkpa na nke a, ya mere ha ga--egbo mbụ aka iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma enweghị ihe ọ bụla nke. Kasị nkịtị nke na mmekọrita na nke bụ na onye ọrụ ahụ enweghị nkwụnye-ins ndị dị mkpa na-eme ka n'aka na needful na-eme na àgwà na klas. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na nke kacha mma e nyere ka usoro na ihe niile dị otú ahụ na sistemụ na ndị kasị mma na-arụnyere na-eme ka usoro ọrụ.
The MOV format bụ nnọọ nkịtị na Ya mere a n'ọnụ ọgụgụ nke CD n'ichepụta ụlọ ọrụ na-ahụ na faịlụ agbakwunyere n'ime na .mov Ọkpụkpọ na ya mere ọ dị mkpa iburu n'obi na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-enwe site n'ịgụ a nkuzi na zuru dị ka ọ ga-ahụ na onye ọrụ bụghị nanị ọkọkpọhi nke ma achọrọ nkwụnye na mgbe mkpa na-arụnyere ka usoro ihe omume a ga-kwuru na-esonụ ngalaba bụ ihe ga- jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na mmekọrita nke mkpebi na ọ na-eme ka anya dị ka o kwere omume. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na nzọụkwụ na terminologies na-a ga-agbaso bụ ndị na-ndị na-etinyere n'okpuru ọkachamara nduzi ma ọ bụ ọzọ onye ọrụ ga-maa inwe mgbagwoju anya na nke a na ga- ọrụ mere na a na-ezighị ezi n'ụzọ.
Nkebi nke 3: Olee otú igwu egwu MOV na Windows Media Player?
QuickTime bụ wuru na-media ọkpụkpọ maka Mac nke ghọrọ ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu. Otú ọ dị, i nwere ike ka na-esi emechu ihu mgbe ị na ike jikwaa emeghe gị QuickTime MOV faịlụ na gị Windows Media Player ma ọ bụ ịkọrọ ha na ndị enyi ọzọ onye bụ onye na Windows arụ ọrụ usoro. Chọpụtagodị ihe kpatara na otú ị pụrụ idozi nsogbu a, ka nwere a lee anya na akwado faịlụ formats on Windows Media Player; asf, .avi, .dvr-MS, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpg, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm na .wmv ma ọ bụghị gụnyere QuickTime MOV faịlụ. Iji were were mbubata QuickTime MOV faịlụ n'ime Windows Media Player (Windows 10 gụnyere), ị have'll iji tọghata QuickTime MOV faịlụ ka Windows Media Player enyi na enyi format mbụ.
Iji tọghata gị QuickTime MOV ka Windows Media Player akwado usoro ọsọ ọsọ na mfe, ọ bụ oge gị na ịnwale ọkachamara ma mfe na-eji Video Converter Ultimate. Ọ na atụmatụ a dị mfe ma sleek interface na rụrụ faịlụ akakabarede ruo 3X ngwa ngwa na-enyere gị mezue ọrụ ole na ole clicks na gị fingertips. N'ebe a, anyị na-amalite.
Nzọụkwụ 1: Ibu Ibu gị QuickTime MOV faịlụ
Wụnye na-agba ọsọ a Video Ntụgharị, ikpuru na-dobe QuickTime MOV faịlụ ka usoro ihe omume window, ma ọ bụ gaa na menu mmanya na-ahọrọ tọghata> Tinye Files faịlụ ka chọta gị MOV faịlụ. Cheta na: a smart Ntụgharị na-enye ohere ogbe akakabarede ịzọpụta gị oge, i nwere ike tinye dị ka ọtụtụ MOV faịlụ dị ka ị chọrọ jidesie ya.
Nzọụkwụ 2: Họrọ WMV dị ka mmepụta Ọkpụkpọ na nchekwa
Pịa mmepụta Format format image imeghe ndọpụta ndepụta ma họrọ WMV (a Windows Media Player si enyi na enyi format) si Format> Video. Ndabara ọnọdụ arụ ọrụ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ezipụta mmepụta nchekwa, dị nnọọ pịa atọ ntụpọ n'akụkụ Open nchekwa ịhọrọ gị chọrọ nchekwa.
Ị nwere ike pịa na Ntọala button ka ọzọ parameters n'ihi na ma ọdịyo na video; gụnyere mkpebi, etiti ọnụego, encoder, bitrates na wdg
Tupu converting, ị nwere ike ihuchalu gị videos ezigbo oge na preview ebi ndụ nakwa dị ka hazie gị video site trimming, cropping, watermarking na-agbakwụnye ụfọdụ ndị ọzọ mmetụta.
Nzọụkwụ 3: Malite QuickTime ka Windows Media Player akakabarede
Kụrụ tọghata ka a smart QuickTime ka Windows Media Video Ntụgharị-eme ndị ọzọ maka gị!
Cheta na: I nwekwara ike tọghata gị QuickTime MOV faịlụ ka ihe MP4, F4V ma ọ bụ wdg na-enwe ha na nso nke ngwaọrụ. I nwekwara ike na-ele ha na ma 3D ma ọ bụ HD format n'ihi na ihe ntụrụndụ.
> Resource> WMP> Edozi-Can't play .mov faịlụ na Windows Media Player 12/11 / 10etc